सूर्यसँग मिलेर बुधले बनायो शुभयोग, यी राशिको खुल्ने भयो भाग्य ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सूर्यसँग मिलेर बुधले बनायो शुभयोग, यी राशिको खुल्ने भयो भाग्य !
वृष राशि-स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। पेट तथा छालाका रोगहरूले सताउन सक्छ। आर्थिक लेन-देन गर्दा विशेष सावधान रहनुहोला। बुधको साथ सूर्यको संयोजनले अदालतको मुद्दामा सफलता प्राप्त होला। तपाईंले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो सफलता पाउनुहुनेछ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **